Myanmar News Net - Mar, 17/05/2022 - 8:30am
YANGON, May 17 (Xinhua) -- Myanmar authorities have seized 251 kg of crystal meth in the former capital Yangon, the Central Committee for Drug Abuse Control has said.
They also arrested 18 suspects in connection with the case, the committee said inapress release on Monday.
The drugs, worth more than 3.35 million U.S. dollars, were found inacar in Yangon's North Okkalapa township on May 4. Two suspects
Irrawaddy - Mar, 17/05/2022 - 8:16am
The post A Strong US-ASEAN Partnership Starts With Myanmar appeared first on The Irrawaddy.
Myanmar News Net - Mar, 17/05/2022 - 5:59am
YANGON, Myanmar - Myanmar announced Thursday that it would resume issuing visitors visas to revive its dormant tourism industry, devastated by the coronavirus pandemic and violent political unrest.
According toagovernment notice published in the state-run Global New Light of Myanmar newspaper on Sunday, tourist "eVisas" will be issued online to harmonize tourism with neighboring countries.
ကသာနှင့်ကနီမြို့နယ်တို့တွင် စစ်ကောင်စီတပ် တိုက်ခိုက်ခံရ
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:39am
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကသာနဲ့ ကနီမြို့နယ်တို့မှာ မေ ၁၅ ရက်က စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ကသာမြို့နယ် သာဂရကျေးရွာအနီးမှာ မေ ၁၅ ရက် မနက်ပိုင်းက အင်အား ၅၀ ကျော်ရှိ စစ်ကောင်စီ စစ်ကြောင်း မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
“မနက် ၇ နာရီလောက် စစ်တပ်က ၅၀ ကျော်လောက်ရှိတယ် ထီးချိုင့်ဘက်ကနေ တက်လာတာ။ သာဂရနဲ့ အင်းကျေးရွာကြားမှာ မိုင်းထောင်ထားတယ်။ အဲ့ဒီနေရာဖြတ်တုန်း မိုင်းငါးလုံး လေါက်ကွဲတယ်။ စစ်တပ်က မိုင်းပေါက်ကွဲလို့ သေတာတွေကော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကော ရှိတယ်” လို့ ဒေသခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရအပြီး စစ်ကောင်စီတပ်က ပစ်ခတ်တာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေကို ထီးချိုင့်မြို့နယ်ဘက် သယ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကို ကသာခရိုင် PDF တပ်ရင်း-၃ (ကသာတပ်ခွဲ) နဲ့ ကသာမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (ညောင်ခြေထောက်တိုက်နယ်တပ်ခွဲ)တို့ပူးပေါင်း ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စစ်ကောင်စီဝပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီး ၁၀ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကသာမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ကနီမြို့နယ်၊ မင်မရွာနဲ့ သင့်ဝင်ကျေးရွာကြား ပြည်တော်သာကန်အနီးမှာ ယာယီစခန်းချနေတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက မေ ၁၅ ရက်နေ့ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ MRDA တပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
MRDA တာဝန်ရှိသူ ဗိုလ်နဂါးက “”ကျနော့်အဖွဲ့တွေက ဒီစစ်ကောင်စီတွေနောက်ကို မနက်ခင်းကတည်းက ချဉ်းကပ်နေတယ်။ ညနေပိုင်းရောက်နေ မင်မရွာနဲ့ အနောက်တောင်ဘက်ထန်းတောထဲတွေ ရောက်တော့ ဒီကောင်တွေ ယာယီစခန်းချပြီး ထန်းရေသောက်တယ်။ ခရီးပန်းလာတာကြောင့် ဒီကောင်တွေ တချို့က ကင်းချပြီး တချို့အိပ်နေတယ်။ အဲဒါကို အခွင့်ကောင်းရယူပြီး ဒေသခံလမ်းပြတဦး အပါအဝင် ကျနော်အဖွဲ့ ၁၉ နဲ့ အလစ်ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်။ တိုက်တာကလည်း သူတို့ကင်းကိုကျော်ပြီး အနီးကပ်မီတာ ၁၅၀ အထိ ချဉ်းကပ်ပြီး အလစ်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လက်နတ်ကြီး ၁၃ လုံး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါ ပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ ၁၅ ဦးထက်မနည်း ကျဆုံးမယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ အကျဆုံးအထိခိုက်မရှိခဲ့ပါဘူး။”
ကနီမြို့နယ် မင်မရွာတိုက်ပွဲမှာ MRDA/KUG/CRA/KLG/DRPA စတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကသာနဲ့ ကနီမြို့နယ် တိုက်ပွဲတွေမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က ထိခိုက်ကျဆုံးမှုအခြေအနေကို ဒီဗွီဘီက သီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။
ရေအရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းရေး တရုတ်အစိုးရက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ ဘီလီယံဖိုး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:32am
၂၀၂၂ ခုနှစ်ရဲ့ ပထမ လေးလအတွင်း ရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု အင်္ဂါရပ်တွေအတွက် တရုတ်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉ ဘီလီယံဖိုး ရှိနေပြီး ဒါဟာ တနှစ်ကို ၄၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာတာလို့ တရုတ် ရေ အရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန သတင်းအချက်အလက် တွေက ပြသထားပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလကနေ ဧပြီလအတွင်း အကြီးစား ရေအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်း ၉ ခုအတွက် ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွေ စတင်ခဲ့လို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုး ယွမ်ငွေ ၃၀ ဘီလီယံ ကျော်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျေးလက်ပြည်သူ ၆ ဒသမ ၆၆ သန်းကျော် အကျိုးရှိစေဖို့ ကျေးလက် ရေဖြန့်ဖြူးရေး စီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ရာမှာ ယွမ်ငွေ ၂၀ ဒသ ၂ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာနက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဒီနှစ်အတွင်း အကြီးစား ရေအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းအသစ် စုစုပေါင်း ၃၀ ကို စတင် တည်ဆောက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ရေအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းတွေအတွက် တနှစ်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်း ပမာဏက ယွမ်ငွေ ဘီလီယံ ၈၀၀ကျော်မယ်လို့ ဝန်ကြီးဌာနက ဆက်ပြောပါတယ်။
အကြီးစား စိုက်ပျိုးရေးခရိုင်တွေမှာ စိုက်ပျိုးရေး ထိရောက်မှုနဲ့ ကောက်ပဲသီးနှံ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေဖို့ ခေတ်မီရေးအတွက် ယွမ်ငွေ ၁၉ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေဟာ ဒေသန္တရအစိုးရတွေအတွက် အထူးရည်ရွယ်တဲ့ ငွေချေးစာချုပ်တွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ လူမှုရေးအရင်းအနှီးတွေ အပါအဝင် ဘဏ္ဍာရေးလမ်းကြောင်းတွေ တိုးမြှင့်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
အီရတ်တွင် သဲမုန်တိုင်းကြောင့် လေဆိပ်၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် အစိုးရရုံးများ ပိတ်ထားရ
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:28am
အီရတ်နိုင်ငံမှာ မေ ၁၆ ရက်က သဲမုန်တိုင်း အကြီးအကျယ် တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ အစိုးရကျောင်းတချို့နဲ့ ရုံးတချို့ ပိတ်ခဲ့ရပြီး ဘဂ္ဂဒက်နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှာလည်း လေကြောင်းခရီးစဉ်တွေကို ရပ်ထား ခဲ့ရပါတယ်။
ဘဂ္ဂဒက်မြို့ပေါ်က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် အာဏာပိုင်တွေက ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင် မှုကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေကို တရက်ပိတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သဲမုန်တိုင်းတွေကြောင့် မြို့တော်နဲ့ တောင်ပိုင်းမြို့တွေမှာ ရာချီတဲ့ လူတွေဟာ အသက်ရှူ ရခက်လို့ ဆေးရုံတွေဆီ ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ ဆေးဘက်အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
မြင်နိုင်စွမ်း ကျနေလို့ နောက်ထပ် အသိပေးစာ မထုတ်မချင်း လေကြောင်းခရီးစဉ် အားလုံးကို ရပ်ထားပြီး လေပိုင်နက်ကို ပိတ်ထားတယ်လို့ ဘဂ္ဂဒက်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် နည်းနည်းအတွင်း အီရတ်မှာ တပတ်ကို သဲမုန်တိုင်း အနည်းဆုံး တကြိမ် တိုက်ခတ်လို့ အဆိုးဆုံးနှစ်အဖြစ် အီရတ်ပြည်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အီရတ်ဟာ ရာသီဥတုဘေးဒုက္ခ အကျပ်အတည်းအတွင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒဏ်မခံနိုင်ဆုံး ငါးနိုင်ငံမြောက် နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောပါတယ်။
လတ်တလော နှစ်တွေအတွင်း အီရတ်မှာ အပူချိန် စံချိန်သစ် တင်ခဲ့ပြီး အနိမ့်ဆုံး ၅၂ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ်ထိ အပူချိန်ကို မှတ်တမ်းတင် ထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် YDF ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:24am
မကွေးတိုင်း၊ ထီးလင်းမြို့နယ်၊ အောင်ရွာကနေ ရွှေအောင်သာရွာဘက်ကို ထွက်ခွာလာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ YDF ထီးလင်းတပ်ဖွဲ့တို့ မေ ၁၆ ရက် မနက်က လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ YDF တာဝန်ခံ သခင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
“အောင်းရွာကနေ ရွှေအောင်သာရွာဘက်ကို ထွက်ခွာလာတာမှာ ကျနော်တို့က ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြတာ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့က နယ်မြေရှင်းလင်းရေးသွားလုပ်တာမှာ သွေးကွက်တွေတော့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ယူနီဖောင်းတွေ မီးရှို့ထားတာတွေ့ခဲ့တယ်။ သူတို့ဘက်က ထိခိုက်‌ကျဆုံးမှုတော့ ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အတည်ပြုလို့တော့ မရခဲ့ဘူး၊ ကျနော်တို့ဘက်တော့ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမရှိဘူး။”
မေ ၁၅ ရက်နေ့ကလည်း ထီးလင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ကျေးရွာအနီးမှာတပ်စွဲထားတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်ကောင်စီတပ်သား ၁၅ ဦးလောက် ကျဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထီးလင်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ကျေးရွာတွေကို စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေပြီး ပြည်သူလူထုကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ကာ နေအိမ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ထီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ ထီးလင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြား အချိန်မရွေး နေရာမရွေး တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့် ခရီးသွားယာဉ်မောင်းတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ဂန့်ဂေါ-ကျောလမ်းပိုင်းကို အသုံးမပြုကြဖို့၊ ခရီးသွားလာတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က တာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ YDF ထီးလင်းက သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:18am
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအန်းဟာ မြို့တော်ပြုံယမ်းရှိ ဆေးဆိုင်တွေဆီ သွားရောက် လည်ပတ်နေပုံကို မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရမီဒီယာ KRTက မေလ ၁၆ရက်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနဲ့ သေဆုံးသူ ၄၀ ကျော်ရှိလာပြီးနောက် ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုကို တားဆီးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
ကင်မ်ဟာ မေလ ၁၅ ရက်မှာ ဆေးဆိုင်တွေဆီ သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အရေးပေါ် ပေါ်လစ်ဗျူရို အစည်းအဝေးကိုလည်း ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။
မြို့တော်မှာ COVID-19 ဆေးဝါးတွေ ဖြန့်ဝေပေးထားပြီး တည်ငြိမ်စေဖို့ စစ်တပ်ကို အမိန့်ပေးခဲ့ ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အရန်ဆေးဝါးတွေကို ဖြန့်ဖြူးဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ ဆေးဆိုင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ချောချောမောမော ဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်မရှိဘူးလို့ ကင်မ်က ပြောတဲ့အကြောင်း အစိုးရရုပ်သံ KCNAကပြော ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတို့ က တာဝန်မဲ့တဲ့ အလုပ်သဘောထား၊ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ပုံတွေကိုလည်း ကင်မ်က ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း KCNA သတင်းမှာ ထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။
လကြတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း လိမ္မော်နီရောင်လပြည့်ကို အမေရိကန်ဒေသအချို့မှ မြင်တွေ့ရ
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:12am
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ မေလ ၁၅ ရက်က လကြတ်နေစဉ်အတွင်း စူပါသွေးလလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်း လဟာ လိမ္မော်နီရောင် အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
လုံးဝ လကြတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း လတခုလုံးက နေနဲ့ ကမ္ဘာကြားကျရောက်ခဲ့လို့ အမေရိကန် အနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းက လကြည့်သူတွေဟာ လိမ္မော်နီရောင် လပြည့်ကို ၁၄ မိနစ်ကြာအောင် ကြည့်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် လဟာ ကမ္ဘာ့အရိပ်ထဲကနေ ပြန်ထွက်သွားအပြီး မထင်ရှားတဲ့အဆင့်ကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
စုစုပေါင်းအနေနဲ့ လကြတ်မှုဖြစ်စဉ် တရပ်လုံးကတော့ နာရီအတော်များများ ကြာခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားသမ္မတပူတင်နှင့် တာဂျစ်ကစ္စတန်သမ္မတတို့ မော်စကိုတွင်တွေ့ဆုံ
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:09am
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာ တာဂျစ်ကစ္စတန်သမ္မတ အီမိုမာလီရာမွန်နဲ့ မေလ ၁၆ ရက်က တွေ့ဆုံပါတယ်။
ရုရှားမြို့တော် မော်စကိုမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ စုပေါင်းလုံခြုံရေးစာချုပ်အဖွဲ့ (CSTO)ရဲ့ ထိပ်သီး ညီလာခံ မတိုင်ခင် ကြိုတင်တွေ့ဆုံတာပါ။
ဒီစစ်ရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် ၆ နိုင်ငံ ရှိပြီး ဒါဟာ နေတိုး စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့အတွက် ရုရှားအစိုးရရဲ့ အဖြေလို့လည်း တခါတရံ ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ရုရှား၊ ဘဲလာရုစ်၊ အာမေးနီးယား၊ ကာဇက်စတန်၊ ကာဂျစ်စတန်နဲ့ တာဂျစ်ကစ္စတန်တို့ ပါဝင်တဲ့ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ရုရှားက တက်ကြွတဲ့ စစ်သည်အင်အား ၉ သိန်းနဲ့ အားအကောင်းဆုံး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။
ရုရှားသံရုံးဝန်ထမ်းများကို FBI နှင့် CIA က စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနေ ရုရှားသံအမတ်ပြော
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:05am
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို FBI နဲ့ အမေရိကန် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA တို့က မြို့တော် ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ရှိတဲ့ ရုရှားသံရုံးဝန်ထမ်းတွေကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းတာဟာ လက်မခံနိုင်စရာပဲလို့ ရုရှားသံအမတ်က ပြောပါတယ်။
ရုရှားသံရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ ရုရှားသံရုံးအနီးတဝိုက်မှာတင် FBI နဲ့ CIA အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ခြိမ်းခြောက်တာကိုရော နားပူနားဆာ လုပ်တာကိုပါ ခံနေရတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး အနာတိုလီအန်တိုနော့ဗ်က မေလ ၁၆ ရက်မှာ အစိုးရ မီဒီယာကို ပြောလိုက်တာပါ။
“ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြား အထူးတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဆက်ဆံရာမှာ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီတွေရဲ့ ပြောင်တင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို အမေရိကန် နိုင်ငံထဲက သံတမန်ရေးရာ အကြီးအကဲက စိုးရိမ်ပူပန်သလို ကျနော်တို့လည်း စိုးရိမ်တယ်”လို့ ရုရှ သမ္မတနန်းတော်ပြောခွင့်ရ ဒမစ်ထရီပဲ့စ်ကို့ဗ်က သတင်းထောက်တွေကို ဖုန်းထဲကနေ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လိင်တူနှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဂျိတ်ဒယ်နီရယ် ဝန်ခံ
DVB - Mar, 17/05/2022 - 4:04am
လိင်တူနှစ်သက်သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ် ဘလက်ပူးလ်အသင်း လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဂျိတ်ဒယ်နီရယ်က အတိအလင်း ဝန်ခံစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၇ နှစ်ပဲရှိ သေးတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂျိတ်ဒယ်နီရယ်ဟာ အခုနှစ်ရာသီကမှ အသင်းကြီးနဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် မေလ ၇ ရက်က ကစားခဲ့တဲ့ ပီတာဘရော့နဲ့ပွဲစဉ်မှာ လူစားဝင်ကစားခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိကစားနေဆဲ ဗြိတိန်ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာတော့ လိင်တူနှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့သူအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
လိင်တူနှစ်သက်သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမလဲဆိုတာ အမြဲတမ်းစ ဉ်းစားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆခဲ့တာလို့ ဒယ်နီရယ်က ပြောပါတယ်။
“ဒီနှစ်က အလွန်ရူးသွပ်စရာကောင်းတဲ့ ရာသီပဲ။ ကျနော့်အသက် ၁၇ နှစ်ရှိလာပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်လည်း ချုပ်ပြီးပြီ။ ဒီရာသီမှာ သွင်းဂိုး ၃၀ သွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို အသင်းကြီးမှာလည်း လူစားဝင်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကစားခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းက မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းထားပြီး ကျနော့်ကို ပုံမှန်ယောက်ျားလေးတဦးလို့ ထင်အောင် အသင်းဖော်တွေကို လှည့်စားခဲ့ဖူးပေမဲ့ ဒါမျိုးက စိတ်ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။ လိင်တူနှစ်သက်သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တာဟာ မှန်ကန်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်” လို့ ဂျိတ်ဒယ်နီရယ်က ပြောပါတယ်။
ဗြိတိန်ဘောလုံးလောကမှာ လိင်တူနှစ်သက်သူဖြစ်တယ်လို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝန်ခံခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားက နောဝှစ်ချ်နဲ့ နော်တမ်ဟမ်ဖောရက်စ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂျက်စတင်ဖက်ရှ်ဟာနူ ဖြစ်ပြီး ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်က ဝန်ခံစကားဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း မန်ယူဂန္ထဝင် နဗီးလ် ပြော
DVB - Mar, 17/05/2022 - 3:57am
အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ အခုနှစ်ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ တခါမှယုံကြည်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးလ်က ပြောပါတယ်။
နယူးကာဆယ်က အာဆင်နယ်ကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ နဗီးလ်က အင်္ဂလန်အသင်းဖော်ဟောင်း ကာရေဂါနဲ့အတူ စကိုင်းပေါ့ရုပ်သံမှာ သုံးသပ်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာတော့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရခဲ့မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ အပြည့်အဝယုံကြည်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောသွားခဲ့တာပါ။
“အာဆင်နယ်အသင်းက လူငယ်အသင်းဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ အတွေ့အကြုံနဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေမရှိပါဘူး။ အရင်ကတည်းက အာဆင်နယ်ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရလိမ့် မယ်လို့ ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး” လို့ ကာရေဂါနဲ့ ဆွေးနွေးမှုမှာ နဗီးလ်က ပြောခဲ့တာပါ။
လီဗာပူးနောက်ခံ လူဟောင်းကာရေဂါကတော့ သူဟာ နည်းပြအာတီတာရဲ့ အမာခံပရိသတ်တဦးဖြစ်ပေမယ့် နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲစဉ်က ကစားပုံကတော့ အလွန်ဆိုးရွားခဲ့ကြောင်း၊ ယူရိုပါလိဂ်ကစားရမယ်ဆိုရင် ကြာသာပတေးနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ၂ ပွဲဆက်ကစားရမှာဖြစ်လို့ ပြဿနာရှိနိုင်ကြောင်း ကာရေဂါက သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ၂ ပွဲဆက်တိုက်ရူံးပွဲတွေ့ခဲ့တာကြောင့် အဆင့်လေး နေရာကို စပါးအသင်းဆီလွှဲပေးခဲ့ရပြီး လက်ကျန် ၁ ပွဲအလိုမှာ ၂ မှတ်အကွာနဲ့ အဆင့် ၅ နေရာမှာရပ်တည် နေပါတယ်။
Myanmar News Net - Lun, 16/05/2022 - 5:03pm
Kathmandu [Nepal], May 16 (ANI): Hailing the laying of foundation stone of India International Centre for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini, an official of Lumbini Development Trust has said that it became possible due to PM Modi's "personal interest and love for Buddhism" and noted that several countries including Thailand, Myanmar and Canada have already built monasteries in the sacred town. Dr Hari Dhoz, Informa
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 3:57pm
The National Unity Government said it held friendly discussions with the powerful armed group, which governs large areas of Rakhine State.
The post Myanmar’s Civilian Government Holds Talks With Arakan Army appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 3:14pm
Yesagyo Township residents flee as around 100 regime troops raid villages.
The post Myanmar Junta Burns Magwe Villages appeared first on The Irrawaddy.
DVB - Lun, 16/05/2022 - 2:06pm
Myanmar News Net - Lun, 16/05/2022 - 1:18pm
Beijing [China], May 16 (ANI): For all of China's insistence that it is against "hegemony" - staring at the USA while it says it- Beijing sure likes to promote its own version of global security. It may couch its vision in glowing slogans, butaworld made in China's mold would beafrightening one. At the World Economic Forum in January 2022, Chairman Xi Jinping reiterated his multipolar vision for "peaceful coexistence"
Myanmar News Net - Lun, 16/05/2022 - 1:06pm
SHAN STATE, Myanmar - According to an officer who participated in the assault, two local defense forces have destroyedamilitary outpost in southern Shan State's Nyaungshwe Township, killing 15 troops and taking five as prisoners.
The outpost was shared by regime forces and members of the Pa-O National Army (PNA), an ethnic armed group allied with the Myanmar military. It was located in Hti Ri,avillage near Ny
Irrawaddy - Lun, 16/05/2022 - 1:04pm
The post Junta Troops Clash With Arakan Army in Western Myanmar appeared first on The Irrawaddy.